1 Ini Pauro, musungwa+ nokuda kwokushumira Kristu Jesu, ndichibatsirwa naTimoti,+ ndiri kunyorera hama yedu, Firimoni, anodiwa wedu uye mushandi pamwe chete nesu,+ 2 naAfia, hanzvadzi yedu, naAkipasi,+ murwi+ pamwe chete nesu, uye ungano inounganira mumba mako:+ 3 Mutsa usina kukodzera kuwanwa norugare zvinobva kuna Mwari Baba vedu naShe Jesu Kristu ngazvive nemi.+ 4 Ndinogara ndichionga Mwari wangu pandinotaura nezvako muminyengetero yangu,+ 5 zvandinoramba ndichinzwa nezvorudo rwako nokutenda zvauinazvo kunaShe Jesu nokuvatsvene vose;+ 6 kuti ushingaire kugoverana nevamwe kutenda+ kwako nokubvuma kwaunoita zvinhu zvose zvakanaka zvatiinazvo zvine chokuita naKristu. 7 Nokuti ndakawana mufaro mukuru nenyaradzo pamusoro porudo rwako,+ nokuti rudo rukuru rwevatsvene rwamutsidzirwa+ pachishandiswa iwewe, hama. 8 Nokuda kwechikonzero ichi, kunyange zvazvo ndiine rusununguko rukuru rwokutaura muzita raKristu kuti ndikurayire+ kuita zvakakodzera, 9 ndiri kukukurudzira hangu nokuda kworudo+ rwaunoratidza, zvandakadai hangu, ini Pauro murume akwegura, chokwadi, iye zvinowo ari musungwa+ nokuda kwaKristu Jesu; 10 ndiri kukukurudzira pamusoro pomwana wangu,+ wandakabereka+ pandakanga ndakasungwa ndiri mujeri, Onesimo,+ 11 aimbova asingabatsiri kwauri asi iye zvino ava kubatsira kwauri nokwandiri.+ 12 Iyeyu ndiri kumudzosa kwauri, chokwadi, iye, ndiye rudo rwangu rukuru.+ 13 Ndingada kuti iye agare hake neni kuti arambe achindishumira panzvimbo pako iwe,+ zvandiri mujeri ndakasungwa+ nokuda kwemashoko akanaka. 14 Asi hapana chandinoda kuita pasina mvumo yako, kuti basa rako rakanaka rive rokuzvidira kwete rokugombedzerwa.+ 15 Zvichida izvi ndizvo zvakaita kuti atize kweawa imwe chete, kuti uve naye zvakare nokusingaperi, 16 asisiri muranda+ asi ava kupfuura muranda,+ ava hama inodiwa,+ zvikuru kwandiri, asi zvakatonyanya kwauri paukama hwokunyama nomunaShe. 17 Naizvozvo, kana uchindiona somumwe wako,+ mugamuchire+ nomutsa sezvawaizondiita. 18 Zvakare, kana akakuitira chinhu chakaipa kana kuti kana aine chikwereti chechimwe chinhu newe, chiverengere kwandiri. 19 Ini Pauro ndiri kunyora noruoko rwangu ndoga:+ ndichachiripa—ndisingakuudzi hangu izvozvo, kunze kwaizvozvo, iwe pachako unotova chikwereti kwandiri. 20 Chokwadi, hama, dai ndikawana rubatsiro kwauri munaShe: mutsidzira rudo rwangu rukuru+ muna Kristu. 21 Ndiri kukunyorera, ndichivimba nokuteerera kwako, ndichiziva kuti uchatoita zvinopfuura zvinhu zvandinotaura.+ 22 Asi pamwe chete naizvozvo, ndigadzirirewo nzvimbo yokugara,+ nokuti ndiri kutarisira kuti neminyengetero+ yenyu ndichasunungurwa+ nokuda kwenyu. 23 Epafrasi+ musungwa pamwe chete neni tiri pamwe naKristu Jesu anokukwazisa, 24 uye Mako, Aristako,+ Dhemasi,+ naRuka, vashandi pamwe chete neni vanokukwazisawo. 25 Mutsa usina kukodzera kuwanwa waShe Jesu Kristu ngauve nemafungiro amunoratidza.+